Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Doha ilaa Almaty duulimaadyada Qatar Airways hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kazakhstan • News • Dadka • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Kazakhstan waa janno dalxiis leh, oo leh dhul-beereedyo kala duwan buuraha baraf-barafka leh ilaa lamadegaanka ballaadhan, kaymaha dhagaxa leh, kaymaha caleenta leh, iyo webiyada aan la taaban. Soo-booqdeyaashu waxay sidoo kale u bogi karaan astaamaha taariikhiga ah oo ay ku jiraan munaaradaha dhalaalaya-huruud ah ee Kaniisadda caanka ah ee Zenkov ee Almaty.
Adeegga cusub wuxuu xoojinayaa xiriirka diirran ee ka dhexeeya Dawladda Qatar iyo Jamhuuriyadda Kazakhstan.
Adeegga cusub wuxuu u saamaxayaa rakaabka u duulaya iyo ka imanaya Almaty inay ku raaxaystaan ​​isku xirnaanta aan kala go 'lahayn in ka badan 140 goobood.
Qatar Airways waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay bilaabi doonto adeegyo rakaab oo qorshaysan Almaty, Kazakhstan laga bilaabo 19ka Noofambar 2021. Adeegga cusub waxaa ku shaqayn doona diyaarad Airbus A320, oo ka kooban 12 kursi oo ah Fasalka Ganacsiga iyo 132 kursi oo ah Heerka Dhaqaalaha.
Adeegani wuxuu u saamaxayaa rakaabka u duulaya kana imanaya Almaty, Kazakhstan si aad ugu raaxaysato isku -xirnaan aan kala go 'lahayn in ka badan 140 meelood, iyada oo loo sii marayo Madaarka ugu Wanaagsan Adduunka, Madaarka Caalamiga ah ee Hamad ee Doha, Dawladda Qadar.
Qatar Airways Madaxa Fulinta Kooxda, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waxaan ku faaneynaa inaan gaarsiinno adeegyadeena ku guuleystay abaalmarinta Kazakhstan, iyagoo ku daraya meeshan u gaarka ah shabakadeena sii kordheysa. Adeeggan cusub wuxuu xoojinayaa xiriirka diirran ee ka dhexeeya Dowladda Qatar iyo Jamhuuriyadda Kazakhstan, wuxuuna xaqiijinayaa ballanqaadkeenna ah inaan sii horumarinno ganacsiga iyo dalxiiska u dhexeeya labadeenna dal ee waaweyn. ”
Kazakhstan waa awoodda dhaqaale ee gobolka Bartamaha Aasiya. Waa janno dalxiis leh, oo leh muuqaallo kala duwan buuraha barafka daboolay ilaa lamadegaanka ballaadhan, canyons dhagaxa leh, kaymaha caleenta leh, iyo webiyada aan la taaban. Soo-booqdeyaashu waxay sidoo kale u bogi karaan astaamaha taariikhiga ah oo ay ku jiraan munaaradaha dhalaalaya-huruud ah ee Kaniisadda caanka ah ee Zenkov ee Almaty.
Jadwalka Duulimaadka ee Almaty laga bilaabo 19 Noofambar 2021:
Jimcaha iyo Isniinta (mar walba maxalliga ah)
Doha (DOH) ilaa Almaty (ALA) QR 391 waxay baxaysaa: 01:15 waxay timaadaa: 08:35
Almaty (ALA) ilaa Doha (DOH) QR 392 ayaa baxaysa: 21:40 ayaa timid: 23:55
Diyaaradda qaranka ee Dowladda Qatar ayaa sii waddo dib -u -dhiska shabakadeeda, oo hadda taagan in ka badan 140 goobood. Qatar Airways sidoo kale waxay leedahay siyaasado ballansasho oo dabacsan oo bixiya isbaddallo aan xadidnayn taariikhaha safarka iyo meelaha loo safro, iyo lacag-celin lacag-la'aan ah dhammaan tigidhada la soo saaray safarka la dhammaystiray 31 May 2022.